Todol injection(Ketorolac) – Online Myanmar Pharmacy
Pack Size: 1 x5ampoule
Todol injection(Ketorolac) - is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
တိုဒေါဆေးသည် အကိုက်ခဲပျောက်ဆေးအုပ်စုဝင်ဖြစ်ပါသည်။ ခွဲစိတ်ခြင်း ၊ အရိုးကျိုးခြင်း ၊ ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရခြင်း ၊ ကဲ့သို့သော ပြင်းထန်သည့်နာကျင်မှုများကိုသက်သာစေရန်အသုံးပြုပါသည်။ဆရာဝန်ညွန်ကြားချက်အတိုင်းသုံးစွဲသင့်ပါသည်။
Non Selective Non-steroidal Anti-Inflammatory Drug (NSAID).
For prophylaxis of ocular surgery and post-operative pain management.it is also indicated in ocular allergy.
Inhibits the bodily synthesis of prostaglandin by inhibiting the cyclooxygenase enzymes (COX-1 & COX-2)